बामे सर्दै छ भक्तपुर हेभिइक्विप्मेन्ट, विकाससँगै समेट्दै अघि बढ्ने छ— अध्यक्ष राजाराम
| 2016-03-25 Published
निर्माण सञ्चार, भक्तपुर ।
राजाराम न्हुसुतू भक्तपुर हेभिइक्विप्मेन्ट (ठुला मेसिन) व्यवसायी संघमा भरखरै सम्पन्न पहिलो जिल्ला अधिवेशनबाट सर्वसहमतिले अध्यक्षमा निर्वाचित भएका
छन् । यसअघि नै निर्माण व्यवसायी संघ भक्तपुरका अध्यक्ष समेत रहेका न्हुसुतू आफ्नो व्यावसायिक क्षमताले जिल्लामा चर्चित व्यक्तित्व पनि हुन् । ठुला मेसिनको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा निर्माण सञ्चार डट कम (अनलाइन) मिडियाले भक्तपुर जिल्लामा केन्द्रित व्यावसायिक विषयमा सहकर्मी ऋषि खतिवडाले गरेको छलफलको संक्षेप—
अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ, कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
अवश्य नै एकखाले खुसी र दायित्व बोध भएको छ । सबै साथीहरुले ठुला मेसिन व्यवसायको भक्तपुरको जिम्मेवारी यसैले (राजाराम) गर्न सक्छ भनी विश्वास गर्नु भएको छ । अध्यक्षमा पनि निर्विरोध चयन गर्नु भएको छ । सबैलाई आभार पनि निर्माण मिडियाकै तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
नवनिर्वाचित समितिको पहिलो वैठक कहिले बस्दै छ ?
नयाँ कार्य समिति बनेको दुई हप्ता जति हुन लाग्यो । हामी दुईचार दिनमै बैठक बस्छौं । संस्थाको आर्थिक विकास, कर्मचारीसहितको नयाँ अफिस राख्ने लगायत पदाधिकारीहरुमा कार्यविभाजन जस्ता विषयमा छलफल गर्नेछ ।
व्यवसायी साथीहरुले तपाईलाई नै विश्वास गर्नुको कारण के हो ?
म भक्तपुर जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघको अध्यक्ष पनि हुँ । सायद त्यहाँ व्यवस्थित तरिकाले गरिएको काम देखेर पनि होला । संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि साथीहरुले मेरो नै आवश्यकता महसुस गर्नुभएको हो कि जस्तो लागेको छ ।
ठुला मेसिन व्यवसायी साथीहरुको कस्तो अपेक्षा छ तपाईसँग ?
सामान्यतया व्यवसायी साथीहरुले एकअर्काको हितका लागि, व्यवसाय कसरी टिकाउने र संघलाई कसरी माथि लैजाने भन्ने अपेक्षा नै हुन्छ । त्यसलाई म जिम्मेवारी पूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने छु ।
भक्तपुर जिल्लामा ठुला मेसिन व्यवसायीको लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
हाल भक्तपुरमा १२० भन्दा बढी ठुला मेसिन छन् । करिब ४० लाखदेखि एक करोडसम्म मेसिन भक्तपुरमा छन् । करिब एक अर्ब माथिको लगानी छ ।
भक्तपुर जिल्लाका सम्पूर्ण ठुला मेसिन व्यवसायीलाई समेट्न सकिएन नि किन ?
भक्तपुर जिल्लामा इँटा व्यवसायी र बालुवा खानी सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई पनि ठुला मेसिन व्यवसायी संघ अन्तर्गत दर्ता गराएका छौं । उहाँहरु समेटिसक्नु भएको छ । ठूला मेसीन हुने इँटा व्यवसायीहरु व्यस्त समयको कारण वैशाख र जेठअघि संघमा ल्याउनसक्ने अवस्था नभएकाले समेट्न नभ्याएको हो । अहिले हामी भर्खर भर्खर जन्मेर बामे सर्दै गरेका छौां । क्रमशः अघि बढ्दै जाँदा सबैलाइृ समेटिहाल्छौं नि ।
नवगठित समितिमा महिलाको स्थानलाई खासै वास्ता गरिएन नि ?
यस व्यवसायमा महिलाको संलग्नता नै नभएका कारणले पनि यस्तो हुन गएको हो । ठूला मेसिन व्यवसाय सहर केन्द्रितभन्दा पनि ग्रामीण इलाकामा बढी आवश्यक हुने हुन्छ । महिलाहरु घरायसी जिम्मेवारीमा बढी हुने हुन्छन् । यो व्यवसायमा महिलाकै संलग्नता हुने भएमा हामी समेटेर अघि बढ्ने छौं ।
भूकम्प र नाकाबन्दी पछिको व्यवसायिक अवस्था कस्तो छ ?
भूकम्प र नाकाबन्दीले अरु पेसा–व्यवसायमा जस्तै ठूला मेसिन व्यवसायीहरु पनि धेरै मर्कामा परे । भनेको बेलामा इन्धन पाइएन । इन्धन नै नभएपछि मेसिन चल्ने अवस्थै रहेन । ब्ल्याकमा तेल खरिद गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा उपभोक्ताले नियमित तिर्दै आएको रेटभन्दा महँगो तिर्नुपर्ने भयो । अझ मिसाओट तेलले मेसिनको इन्जिन नै खराब हुने अनि व्यवसायी पनि घाटामा जाने अवस्था आएपछि कसरी व्यवसाय फस्टाउनु र ।
खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ नि तपाईंहरुलाई, हैन र ?
हैन । यो सरासर गलत कुरा हो । जग्गा व्यवसायीले गर्ने काम ठुला मेसिन व्यवसायीको काम पनि त हैन नि । जग्गा सट्टापट्टा गर्नेले हाम्रा ठूला मेसीनहरु भाडामा लिएर सञ्चालन गर्न पाए । हामी हाम्रो मेसिनहरु भाडामा नलगाई त बस्न सक्तैनौं । किनकि हाम्रो व्यवासाय नै यही हो । हामीले जग्गालाई खण्डीकरण गर्ने काम गरेका हैनौं ।
नेपालमा ठूला मेसिन व्यवसायको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
नेपाल आफैंमा अविकसित देश हो । विकासका लागि थुप्रै ठूला मेसिनहरु भित्र्याउनु पर्ने हुन्छ जसलाई हाम्रा कुट्टो कोदालोले सम्भव छैन । तसर्थ, ठूला मेसिन व्यवसायको भविष्य नेपालमा उज्ज्वल छ ।
प्रकाशितः १२ चैत, ०७२